THA2 - YCC
MICT Park Mandalay
We firstly believe that are founders and shareholders are one biggest asset,and it’s their passion and commitreat that sets YCC apart from the rest.For that reason,we will head of create an rnnieanment that’s innovotive,collaborative and coorporative,and so that everyone is inspired to contivee to achieve the impossible.
Seminar Room 1-3
YCC was founded in 2003 with the primary vision of stimulatiy the development pf Myanmar ICT industry by offrecting local,regional & international business.For that reason we work head to create an ICT Park in 2003,located at 3rd floor of Yadanabon Super Center,source of 34thx 77th,Mandalay,Myanmar.Company founders are used the experience and refunrs to create an ICT Hub based on ICT industry needs. Now,more than ten years later,our visions remain the same_to develop the world-class infrestructions & facilities Techo-Commercial Park and try to leverage international invertments among the ICT business. Still pracitaly owned, the business cartiness to glow and develop. Ongoing international investments in telecom sectre & parks.
Mandalay ICT Park သည် မန္တလေးမြို့၏ အချက်အချာကျသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
Mandalay ICT Park နှင့် မနီးမဝေးတွင် ဘူတာကြီး၊ Diamond Plaza၊ Skywalk၊ ရတနာပုံဈေး၊ ဟိုတယ်များနှင့် ဘဏ်ပေါင်းစုံတည်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျယ်ဝန်းပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ရုံးခန်းနေရာများကို အင်တာနက် နှင့် အခြား ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးထားပါသည်။ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်မျှတပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေသည့်အတွက် ဌားရမ်းလုပ်ကိုင်သင့်သော နေရာလည်းဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Seminar, Workshop, Job fair, Training, Meeting အစရှိသည့် ပွဲများကို Mandalay ICT Park တွင် သက်သာသောနှုန်းထား၊ ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ကျင်းပပြုလုပ်နိူင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိူင်ပါသည်။
Let's Look What We are
Rememberance for helded in Seminar Room
22nd January 2017 → မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှ ကြီးမှူး ကျင်းပသော Developer Conference အား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Asia Speed Construction မှ Environmental Management System ဟောပြောပွဲ နှင့် သင်တန်းပေးခြင်းအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
9th & 10th January 2017
United Pacific Company မှ Staff Motivation Training အား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စွန့်ဦးတီထွင် လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ကြီးမှူး ကျင်းပသော စာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးပညာသင်တန်းအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Mandalay ICT Industry မှ SME လုပ်ငန်းရှင်များကို Ayarwaddy Bank မှ ချေးငွေလျှောက်ထားခွင့်ပြုပြီး ချေးငွေချပေးမှု အကြောင်းကို Ayarwaddy Bank Manager မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
YCC was founded in 2003 with the primary vision of stimulatiy the development of Myanmar ICT .